माया (love) किन हुन्छ ? ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 11:56 PM
'लभ' (Love) को कारण के हो ? किन हुन्छ प्रेमी-प्रेमीका बीच आकर्षण ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पाउन वैज्ञानिकहरूले कयौँ प्रयास गरेका छन । तिनका केही खोजमा विश्वास गर्ने हो भने दुई प्रेमीबीच 'इमोसन' र त्यसमा परिवर्तनको मुख्य कारण हो - शरीरमा हुने रासायनिक तत्व ।
'लभ' का बिभिन्न बेग्लाबेग्लै चरणहरू ( इन्फेचुएसन, कडलिङ्ग , एट्रेक्सन ) यहाँसम्म कि विश्वासघात (विट्रायल) को पछि पनि केही खास केमिकलको हात हुन्छ । वैज्ञनिकहरूका अनुसार आकर्षण वस्तुत: यो न्युरोकेमिकल का भर्चुअल एक्सप्लोजन सरह हुन्छ । 'पिइए' एक केमिकल हो जसले नर्भ सेल्स माझ सुचनाको प्रवाह बढाउँदछ । यो रसायनमा डोपामाइन र नोरिफिनेराइन नामक दुई रसायनहरूले बडो रोचक काम गर्दछन । डोपामाइनले गुड फिल को अनुभुति दिलाउँछ तथा नोरिफिनेराइनले एड्रिनलको उत्पादन बढाउँछ । कसैलाई हेर्दा बढ्ने मुटुको धड्कन यि रसायनकै काम हुन । यी तीनटै रसायनले संयुक्तरूपमा काम गर्दछ । यसैकारणले नयाँ प्रेमीले आफुलाई हावामा उडिरहेको तथा एकदमै ऊर्जा पाएका अनुभव गर्दछ ।
कसैसँग कडल-अप गर्ने मन त्यसै हुदैंन । अक्सिटोसिन जसलाई कडलिग केमिकल पनि भनिन्छ । यो त्यसैको कारण हो । अक्सिटोसिन मदरहुडसँग सम्बद्ध रहेको पनि मानिन्छ तर यसले महिला पुरूष दुवैलाइ बढी कुल र एक अर्काको अनुभबलाई संवेदनशील पनि बनाउँदछ । सेक्सुअल भावनामा पनि यसको खास भूमिका हुन्छ । प्रेमी-प्रेमीकाको तस्विर हेर्नु , त्यसबारे सोँच्नुदेखि आवाज सुन्ने , खास एपिरियेन्स सम्मले तपाईको शरिरका अक्सिटोसिनका उत्पादन बढाउन सक्छ । यदि प्रेमी उपस्थित छ भने यही हार्मोनले एक अर्कालाई अँगालो हाल्न प्रेरित गर्दछ । इन्फेचुएसन कम हुनासाथ रसायनको एक नयाँ समुहले टेकओभर गर्दछ , जसलाई इन्डोफिन्स (खुसी बनाउने रसायन पनि भनिन्छ)ले सिर्जना गर्दछ । यो पीइएझै उत्तेजक हुदैन तर बढी एक्टिभ र कुल गर्ने हुन्छ । यसैले गर्दा इन्फेचुएसनपछि मायको अर्को चरण अर्थात एटेचमेन्टमा अन्तरङ्गता सँगसँगै , विश्वास , न्यानोपन एवम् सगैँ समय बिताउने जस्तो भावना विकसित हुन्छ । जति यी रसायनको बानी बस्दछ त्यति नै प्रेमी-प्रेमिकालाई एक अर्काबाट टाढिन मुश्किल हुन्छ । यसै कारणले लामो सम्बन्ध टुट्न मानिसलाई असह्य हुने गर्छ । यसको कारण यी रसायनको बानी हो ।
Categories: Love, स्वास्थ्य
Keshar Bhandari December 11, 2010
धेरै ज्ञानवर्दक र जानकारीमुलक........
रूक्मागत शर्मा पौडेल December 23, 2010
बच्चाहरू तथा बयस्यकलाई समेत निकै उपयोगी सामग्री रहेछ। यसको लागि धन्यवाद।